UZuma uselutholile usuku lwakhe lokuya enkantolo | Scrolla Izindaba
UZuma uselutholile usuku lwakhe lokuya enkantolo
Kuthathe imizuzu engaphansi kweyi-10 eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu ukuthi kutholakale usuku lokuqulwa kwecala likaJacob Zuma lobugebengu.
Owayengumengameli wezwe uJacob Zuma uzoba nosuku lwakhe enkantolo mhla zi-17 kuNhlaba.
UZuma nabalandeli bakhe bebengekho.
UZuma kanye ne-Thales, inkampani esebenza emazweni amaningana yase-France, babhekene namacala okushushumbisa imali, ukukhwabanisa kanye namacala enkohlakalo asuselwa ku-Arms Deal eyabiza izigidigidi zamarandi ngonyaka we-1990.
Umshushisi woMbuso uBilly Downer uthe, abashushisi bebehlome ngofakazi abangaphezu kwama-200.
UDowner uthe, usuku kuvunyelwane ngalo phakathi kombuso, abammeli benkampani i-Thales kanye nabammeli bakaZuma.
UZuma kusolwa ukuthi wayefuna ukufumbathiswa yinkampani ezivikelayo i-Thomson-CSF, manje esibizwa nge-Thales, ukuze avikeleke kunoma yikuphi okunye ukushushiswa okuzayo.
UZuma uhlale eziphika lezi zinsolo ethi wayenguNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komnotho KwaZulu-Natal futhi wayengahlangene nakancane namathenda kahulumeni kazwelonke.
Wayephethe isikhundla esinamandla sokuba nguSihlalo kazwelonke we-ANC ngaleso sikhathi.
Indodakazi kaZuma uDudu Zuma-Sambudla ikhiphe isitatimende seJG Zuma Foundation ethi, ukuhlehliswa kwakamuva kukhombisa ukuthi i-NPA ayikulungele okwamanje ukuqhubeka nokuqulwa kwecala.
“Ngesikhathi lokhu kuhlehliswa kuqhubeka kanjalo namalungelo kaMengameli uZuma nawo ayaqhubeka nokwephulwa njengoba kuthiwa unecala.
“Sizoqhubeka nokucela abezomthetho ukuthi balisuse leli cala kuze kube umbuso usulunge ngempela, kunokuba ubize uMengameli uZuma ngesigebengu.”